Umhla My Pet » 5 Eyodwa Su Umhla Ideas
ukubuyekezwa: UCanzibe. 21 2020 | 2 min ukufunda
Ehlotyeni lixesha ogqibeleleyo ukukhaba umva kwaye bonwabile ixesha nabahlobo kunye nosapho ngokufanayo. Yinto kwakhona ixesha ngokugqibeleleyo ukufumana ukuze ukuzonwabisa, na wenu imihla run-of-the-lokusila. Khangela ezi mbono ezintlanu umhla ehlotyeni eyodwa ukuba uqinisekile ukuba kuziphosa iinkumbulo kakhulu ixesha elide emva kokuba amaqondo dropped.
Canoeing Adventures: Ukuba kukho umlambo okanye ezinkulu ichibi kwindawo ngaphakathi kumgama ukuqhuba, kukho ithuba elihle kakuhle ukuba kukho kwakhona iphenyane ngumnikelo itshatshazi (okanye Urengoy) iirenti. Uninzi la mashishini avulekileyo kuphela ngexesha kwiinyanga zasehlotyeni, ngoko qiniseka ukuba babhukishe angazinikeli yakho kude ngokwaneleyo kwangaphambili ukuba akuyi kuwuhlisa kuphoxwa ukufika kwindawo kuphela ukufumana zonke izikhephe ezikhoyo sele ukhangele ukuze imini. Ngokufuthi iziza ezifana Groupon kuba kuyo arhente ezifana nazo, ngoko imali ngokwenza ngokusebenzisa enye yezi inika ingayiyo enokwenzeka. Ndilungise sasemini sepikiniki kwinkonkxa manzi ukugcina wena nomhla wakho bondlekile ngexesha ebingalingi yakho.
Frisbee okanye Mini Golf Iingxaki: Tsiba eqengqwe nasezirhangeni mnyama kwiinyanga zasehlotyeni kwaye khetha enye yezi ndlela fun ohlawulwayo endaweni. Nangona Galufa mini ibonakala "ekhuselekileyo" ukhetho nabani akuqinisekanga / ubuchule bakhe yakhe lweembaleki, ngakumbi athletically lula ungafuna kuthatha ithuba kwaye khangela galufa Frisbee basekuhlaleni. Kuphela zombini ezi zinto ogqibeleleyo ukugcina mthulise kusenokubanzima bay, kodwa ngokuqinisekileyo nazo iindlela kakhulu ukufumana basondela kancinci ukuya kumhla wakho njengoko ukubanceda bana phandle ifomu egqibeleleyo abasondeza / ilahle. Kuphelisa umhla wakho uhambo ukuya ikhephu cone basekuhlaleni ematyotyombeni-elinye ishishini ngexesha ehlotyeni ngokokuqhelekileyo evulekileyo kuphela.
Dog Park Imihla: Ukuba wena nomhla wakho bathand inja ukufunda, akukho mfuneko ukushiya amaqabane akho Canine ngasemva njengoko intloko ngenxa ingokuhlwa Yibanolonwabo. Nangona nto eqhelekileyo ukuba zivalwe kwiinyanga zasebusika, ezininzi iipaki inja asekuhlaleni zivulelekile ngexesha ehlotyeni. Ukuba kuyenzeka, qiniseka ukuba ukufunda ncomo intanethi kwaye baphande nayiphi na imigaqo eyodwa nepaka inja ethile phambi ukuzisa inja yakho nomhla kubo. Ukuba akukho iipaki inja kubonakala ukuba evulekileyo kwindawo yakho, ngokukhetha zicwangcisele umhla inja-zihamba kunye nezinye yakho ebalulekileyo ingayiyo njengenye enokukhethwa fun endaweni. Nikunyamekele ukuziphathela amanzi engaphezulu ukugcina wonke kakuhle epholileyo ndlekaka ngexesha kuwe umhla.
Nangaphandle Theater ngokuhlwa: Wasebenzise wokuhlwa efudumeleyo kwaye bafunde kancinane ngakumbi yakho lomboniso ubugcisa basekuhlaleni. kwiidolophu ezininzi zifundisa amaxabiso ivideo okanye lincitshiswe ngenxa amatikiti zeziganeko yangaphandle yeqonga, kunemise- ukusuka neyeqonga ukuya imidlalo Shakespearean ukuba lomculo iikonsathi. bands Local nazo zidla enza ibonisa kwiindawo ezahlukeneyo ngaphandle kwiinyanga zasehlotyeni kwakunye. Ukuba iinketho akukho yangaphandle kwezobugcisa kubonakala kufumaneka kwingingqi yakho, cinga nondele nayiphi zemiboniso drive-in endaweni; nakuba phantse efanayo njengoko kusenziwa, ukuqhuba-in zemiboniso kusafuneka umgangatho othile ekho kubo.
Geocaching: Nangona oku Nngokobuchwepheshe ayikho umsetyenzana loo nto kuphela kuphela kwiinyanga zasehlotyeni, ithuba elihle imozulu engcono ngokuqinisekileyo akayi ayinakulimaza amathuba akho uzonwabisa ngexesha umhla Geocaching. Ukuboleka inkqubo iGPS evela kumhlobo okanye usebenzise efowuni yakho sinokukunceda ube uphendlo lwakho, kwaye uphando geocaches basekuhlaleni phambi kokuqalisa phandle ngomhla wakho. Qiniseka ukuba nako ukuzisa item kumnandi kuwe nomhla wakho ukushiya kwi-cache!